Morores's moresse - Serge Bilé - Afrikhepri Fondation
La Mauresse de Moret: Ny mona amin'ny ra mena
Vity misy tantara iray izay anisan'ny an'ny mpanjaka frantsay ary momba ny masera mainty iray izay mpikambana feno tao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka tamin'ny fotoan'i Louis 14. Tamin'ny Oktobra 1664, ny Mpanjakavavy Marie-Thérèse, vadin'ny mpanjaka Louis 14, niteraka zazavavy kely "mainty toy ny ranomainty" (toy izany ny teny nampiasan'ireo izay teo am-piterahana). Tamin'ny fotoana nahaterahan'io, ny mpanjaka lehibe Marie-Thérèse dia nanana Moor na mihoatra (teny nomena ny olona manana hoditra mainty nipoitra tany Afrika tamin'izany fotoana izany) izay azony ho fanomezana ho an'ny fotoana vitsivitsy tany Frantsa ny ny mores dia raisina ho andevo.
Ny mpanjakavavy atao hoe Nabo dia nandany ny tontolo andro nanelingelina azy ary nampihomehy azy. Ny mpanjaka izay voahodidin'ny tompovavy maro dia tsy nikarakara ny vadiny. Tena tian'i Nabo ny mpanjakavavy noho ny toetrany sy ny fiheverana nandroany azy. Raha ny filazan'ny vavolon'ny fahaterahan'ny mpanjakavavy tamin'izany fotoana izany (ny Princess of Conti, zanakavavin'ny mpanjaka sy Saint Simon) mpanjakavavy andro vitsivitsy talohan'ny nahaterahany dia natahotra mafy sy ketraka. Tamin'ny fiterahana, ny rahalahin'ny mpanjaka dia nampiavaka ny mampiavaka ny zaza sy ilay mpanompo Nabo izay maty tampoka andro vitsivitsy taorian'ny nahaterahan'ny vadin'ny mpanjaka.
Tsy afaka nijanona tao an-dakilasy ilay zazavavy kely satria hita miharihary fa hiteraka korontana izy. Niditra am-ponja tao amin'ny trano fivarotana iray tao amin'ny vohitra Moret-sur-Loing izy. Ilay moresse antsoina hoe Louise-marie-thérèse (fampidirana ny anaran'ny mpanjaka sy ny mpanjakavavy) dia nandany ny androm-piainany tao amin'ny trano fitokanana izay nitondran'ny masera azy tsara fa tsy ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka izay tonga namangy azy matetika (tena akaiky ireo zanakalahin'ny mpanjaka sy ny mpanjakavavy nantsoiny hoe rahalahiny sy rahavaviny izy). Hatramin'ny 1779 dia nahantona tao amin'ny biraon'ny trano fitokanana i Moret ny sarin'ny Moresse, saingy ao amin'ny tranomboky Ste-Geneviève no misy azy ankehitriny ary misy rakitra banga ihany koa misy taratasy vitsivitsy hatramin'ny fotoana nanoratana azy: taratasy mikasika ny zanakavavin'i Morse Louis 14.
Ny Mooress an'ny Moret
3 vaovao avy amin'ny € 15,00
Vidio € 15,00
Nohavaozina farany tamin'ny 28 Jolay 2021 1:20 PM
Ny zava-kanto fisaintsainana - Matthieu Ricard (Audio)
Ny tombontsoa azo avy amin'ny menaka mainty
Steve Biko - ny feon'ny fieritreretana mainty
Osiris-Christ dia mainty amin'ny zanak'olombelona
Minoa ny tenanao - Joseph Murphy (Audio)